KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Suldaan Cabdi Cali Sokor oo lagu Aasay Magaalada Kismaayo
Saturday 2 February 2013 12:44
Suldaan Cabdi Cali Sokor oo lagu Aasay Magaalada Kismaayo
Kismaayo (KON) - Innaalillaahi wa innaa Ilaahi Raajicuun - Waxaa Maantay Aas Qaran loogu sameeyay Magaalada Kismaayo Allahu u naxariistee Suldaan Cabdi Suldaan Cali Sonkor oo ku geeriyooday Magaalada Nairobi.
Suldaan Cabdi Cali Sokor oo si weyn looga yaqaano Soomaaliya muddo dhowr sana ahna soo hayay Xilka Suldaaninimada Dhulka Waamo ayaa la filayaa in Maanta meeydkiisa lagu Aaso Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubada Hoose.
Sulddaanka oo muddo dheer xilkaas soo hayay ayaa Taariikh Nololeedkiisa waxaa ka hadlay rag fara badan oo la soo shaqeeyay waayihiisa iyagoona sheegay waxyaabaha lagu xasuusto Sulddaanka in ay ka mid ahaayeen ka waabasho la’aanta Runta Kaftanka iyo Wadaniyad Jacaylka.
Suldaan cabdi Cali Sokor ayaa muddooyinkii danbe waxa uu ku Xanuunsanaa magaalada Nayroobi halkaasoo markii danbana uu ku Geeryooday iyadoona la filayo in isla manta lagu Aaso Gobolka Jubada Hoose.
Si kasta ha ahaatee Suldaanka ayaa waxa uu xukunka ka dhaxlay Walaakiis kaasoo isaguna ka sii dhaxlay Aabihiis, waxaana qaybaha war baahinta soo gaaraya Dhambaalo Tacsiyeen ah oo kala imaanaya qaybaha kala duwan ee Bulshada Soomaaliyeed.
Warbaahinta Keydmedia Shaqaalaheeda ku kala sugan dunida daafaheeda waxay tacsi tiiraanya leh hawada u marinayaan qoys-kii uu ka geeriyooday Marxuum Suldaan Cabdi Cali Sokor.